उम्मेदवार काठमाडौं क्षेत्र नं २ ‘क’ प्रदेश सभा प्रत्यक्ष ।
युवा नेता लोकेश ढकाल नेपाली कांग्रेसका उदीयमान राष्ट्रिय व्यक्तित्वमध्ये एक हुन् । नेपाली कांग्रेसले अलम्बन गर्दै आएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको उच्च आदर्शप्रति निष्ठा, लगनशीलता, कर्मठता र बौद्धिक नेताका रुपमा समेत बेग्लै पहिचान बनाएका ढकाल प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौं क्षेत्र नं २ ‘क’ बाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ । स्वच्छ छवी र उच्च आदर्शका धनी ढकाल नेपाली राजनीतिले लिएको बाटो यसका विकृति, विसंगति, धनवाद, डनवादबारेमा समेत खुलेर वहस र विरोध गर्ने हिम्मत राख्छन् ।
१५ वर्षसम्म यस क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापतिको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गरेका ढकाल काँग्रेसको नीति निर्माणको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यको रूपमा संगठनमा निरन्तर क्रियाशील छन् । पार्टीमा अनुशासित र इमान्दारीपूर्वक लाग्नु भएका उनले २०३५/०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र राष्ट्रिय जनमत–संग्रहबाट सक्रिय राजनीतिक यात्रा थालेका थिए । मुलुकका हरेक राजनीतिक आन्दोलन २०४६ साल र ०६२/६३ को जनआन्दोलनका सबै मोर्चामा उनको सक्रिय सहभागिता रह्यो । पत्रपत्रिकामा स्तम्भ लेखन र कुनै सयम पत्रकारिता क्षेत्रमा समेत क्रियाशील ढकालले राजधानी अवस्थित ३ नं प्रदेशलाई नमूना बनाउने लक्ष्य राखेका छन् । यो क्षेत्रबाट आफू निर्वाचित भएमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मुख्य मन्त्री बन्ने कुरा ढकाल नकार्दैनन् । प्रस्तुत छ, उनको चुनावी घरदैलो, चुनावी माहोल र क्षेत्रवासीका लागि उनले अघि सारेको विकास सम्बन्धि योजनाबारे अमरवाणी डटकमले गरेको कुराकानीः
चुनावी घरदैलोको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ, चुनावी माहोल कस्तो छ ?
हो, हामी घरदैलोको अन्तिम चरणमा छौं । चुनाव आउन पनि केही दिन मात्र बाँकी छ । मतदाता निर्वाचनको तीब्र प्रतिक्षामा छन् । अझ मेरो क्षेत्रका जनता त चुनावका लागि व्यग्र नै छन् भन्दापनि हुन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा भाग लिएका २ नं क्षेत्रका वासिन्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबारे उम्मेदवार सरह नै सचेत रहेको मैले पाएँ । राजनीतिक स्थायायित्व र संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अपरिहार्य छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधान हामीले नै कार्यान्वयन गर्ने अभिारा जनताले सुम्पनेमा म विश्वस्त र दृढ छु ।
पछिल्लो समय राजनीतिप्रति मतदाताको चासो र रूची घटेको देखिन्छ, तपाइँलाई के लाग्छ ?
पक्कै पनि । म भोटमाग्न पटक–पटकका निर्वाचनमा जनताको घरदैलोमा पुगेको छु । मलाई अनुभव छ, उतिबेलाका मतदाता र अहिलेका मतदातामा निकै अन्तर छ । पहिला जस्तो सम्मान र विश्वास अहिलेको राजनीतिमा कहाँ पाउनु ? घरदैलोमा जाँदा कति व्यक्ति घरको छतबाट तल ओर्लिदैनन् । पहिला यस्तो थिएन । खासमा यो नेताहरुको व्यवहारकै कारणले गर्दा भएको हो । चुनाव जितिसकेपछि न जनताको घरदैलो न त स्थानीयका समस्याप्रति नै सजग हुने पारिपाटीले गर्दा जनतामा एक खालको राजनीतिप्रति वितिष्णा नै जागेको अवस्था छ ।
सरकार टिकाउन नसक्ने पनि कांग्रेस नै हो । सफल नेतृत्व र घरेलु झगडाको सिकार पार्टी छ नै । पार्टी गुट/उपगुटले थलिएको पनि सत्य हो । तर यो अरु पार्टीमा नभएको चाहिँ होइन । यी कारणले पार्टीप्रति आममतदाताको विश्वास घटेको छ । कांग्रेसले गल्ती गर्यो होला । तर, कांग्रेसको विकल्प कांग्रेस नै हो । अरु पार्टी बन्न सक्दैन ।
कांग्रेसलाई पटक–पटक वहुमतदिँदा पनि मुलुकको विकास नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, तपाईको धारणा के छ ?
यसमा सत्यता छैन म भन्दिनँ । तर, मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि कांग्रेसले जुन संघर्ष गर्यो त्यसको तुलना अरुसँग गर्न सकिदैन । पक्कैपनि २०१५ साल र ०४६ सालमा कांग्रेसलाई जनताले वहुमत दिएको छर्लङ्गै छ । कांग्रेस नै धेरै समय नै सरकारमा बसेको छ । सरकार टिकाउन नसक्ने पनि कांग्रेस नै हो । सफल नेतृत्व र घरेलु झगडाको सिकार पार्टी भएको छ नै । पार्टी गुट÷उपगुटले थलिएको पनि सत्य हो । तर, यो अरु पार्टीमा नभएको चाहिँ होइन । यी कारणले पार्टीप्रति आममतदाताको विश्वास घटेको छ । कांग्रेसले गल्ती गर्यो होला । तर, कांग्रेसको विकल्प कांग्रेस नै हो । अरु पार्टी बन्न सक्दैन । पार्टी भित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न हामी सक्षम छौं, गर्छौ पार्टी सुधार्छौ भनेर नेतृत्व अहिले कृत संकल्पित भएको अवस्था छ । हामी एक ढिक्का छौं । कांग्रेसले वहुमत ल्याउछ संविधान कार्यान्वन र मुलुक संम्विद्ध बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौं ।
तपाई यसअघि नै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि २ पटक चुनाव लडेको व्यक्ति अहिले प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्नुभएका छ ? मुख्य मन्त्रीको दाबेदार भएर हो ?
मैले मुख्य मन्त्री बन्छु भनेर घोषणा गर्दै हिडेको छैन,् गर्न पनि गर्दिन् । आफ्नो प्रचार आफैं गर्ने शैली मलाई हल्का लाग्छ । प्रदेश सभामा मेरो उम्मेदवारी पार्टीको निर्णय हो । म कांग्रेसको एउटा सिपाही हुँ, पार्टी अनुशासन, नीति र पार्टीले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्छु । पार्टीले प्रदेश सभामा चुनाव लडन पठाएकाले उम्मेदवार बनेँ । मिडियाका साथीभाई र पार्टीका केही साथीहरुले पनि त्यस अर्थमा अथ्र्याएका छन् त्यो म नकार्दिन । प्रदेश नं ३ मा कांग्रेसले वहुमत ल्यायो र मैले चुनाव जिते भने त्यो असंम्भव छैन । प्रदेश सभा प्रतिशप्रर्धी उम्मेदवार कुनै भन्दा मेरो पनि कम्ति योगदान छैन ।
अहिले प्रदेश सभा निर्वाचन र उम्मेदवारको जेजति चर्चा हुनुपर्ने त्यो भएको छैनन, तपाईलाई के लाग्छ ?
यो मैले पनि अनुभूत गरेको विषय हो । ऐतिहासिक यस निर्वाचमा जसरी प्रतिनिधि सभाको चर्चा, हेभीवेटका नाममा पत्रपत्रिकामा ठूला हेडलाइन छापिने तर, प्रदेश सभा कता–कता छाँयामा परेको जस्तो भएको छ । न उम्मेदवारको चर्चा न त एजेण्डाबारेमै जति वहस हुनुपर्ने हो भएको छैन । संविधान कार्यान्वयको पहिलो खुटकिलो नै संघ हो यसबारे जेजति वहस चर्चा हुनुपर्ने हो त्यो अभाव खड्किएको छ ।
हेभिवेट एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको क्षेत्रमा छ भिडनु भएको छ,कत्तिको पेलानमा पर्नुभएको छ ?
मेरो प्रतिप्रर्धा माधव नेपालसँग होइन । हामीलाई पेलान पनि छैन । यो क्षेत्रमा यसअघि पनि कांग्रेसले नै चुनाव जितेको हो । मेरा प्रतिप्रर्धी भन्दा म निकै अगाडि छुँ । शंका छैन । तैपनि चुनाव हो भन्न सकिन्न् । मेरो क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिका ९ नं वडा र ३२ नं पर्छ । ९ नं यसअघिको स्थानीय निर्वाचनम कांग्रेसले नै जितेको छ । उता पनि हाम्रो त्यति नराम्रो छैन । म जनतालाई सपना र विश्वास वाड्नु भन्दापनि यथार्थ भन्न रुचाउँछु ।
चुनावी मुद्दा के–के अघि सार्नुभएको छ ?
कोटेश्वर तिनकुनेमा व्यक्तिको जग्गा महानगरपालिकाले अधिग्रहण गरेको वर्षो भइसकेको छ । न बगैचा बनेको छ न त जनताले उचित मुआब्जा नै पाएका छन् । समस्या ज्यूँकात्यूँ नै छ । बाटो विस्तार गर्दा होस कि सार्वजनिक क्षेत्र विस्तारका लागि । जनताको सम्पत्ति क्षतिपूर्ति विना उनीहरुको चित्त नबुझाई लिन पाइँदैन् । एयरपोर्ट विस्तारका लागि जडिबुटी र पेप्सी चोक सम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्दा पनि स्थानीयलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउनै पर्छ । अर्का हाम्रो सहर अहिले निकै हिलो धुलोको सिकार बनेको छ । सामाजिक र नागरिक सुरक्षा चुनौति बढेको छ । धार्मिक सांस्कृतिक संरचनाको जगर्ने हुनुपर्छ । मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन प्रदेश नं ३ लाई एउटा नमूना प्रदेश बनाउने अठोट लिएको छुँ । जनताले साथ दिएमा ५ वर्षभित्र यो केन्द्रको राजधानी समेत रहेको प्रान्तलाई ‘मोडल प्रान्त’ बनाउने र जनतालाई सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ्य वातावरण र उचित शिक्षा प्रबन्ध गर्ने मेरो संकल्प छ ।
प्रकाशित १५ मङ्गसिर २0७४ , शुक्रबार | 2017-12-01 12:10:19